/ Haddii aad rabto inaad rafcaan ka qaadato
Maxkamada hey’adda laanta socdaalka ayaa tijaabinaysa rafcaankaaga
Marka hore Hey’adda laanta socdaalka ayaa eegaysa warqaddaada rafcaanka si ay u eegaan bal in go’aanka wax laga bedelikaro. Haddii ay markaa Hey’adda laanta socdaalka u aragto in aanay waxba ka bedeleyn go’aankii ay gaareen waxay markaa u sii gudbinayaan maxkamada hey’adda laanta socdaalka (migrationsdomstolen). Markaa waxay noqonaysaa inay maxkamadu bedesho go’aankii hore lama ay ku raacdo go’aankii Hey’adda laanta socdaalku ay hore u gaartay.
Maalinta ay maxkamada hey’adda laanta socdaalku hesho warqadaada rafcaanka waxkasta oo su’aalo ah ee la xiriira arrintaada iyo sida ay maxkamadu u shaqayso waxaad kala xiriiraysaa maxkamada hey’adda laanta socdaalka. Waa mas’uuliyad adiga kuutaala sidii aad u ilaalin lahayd xukumada maxkamada hey’adda laanta socdaalka, He’yadda laanta socdaalku shaqadaas adigu kuuma qabanayso.
Haddii aad adigu leedahay abukaate ku caawiya Hey’adda laanta socdaalku kaama bixinayso gaadiidka aad u raacayso marka aad u tegeyso abukaatahaaga marka dacwadaada/rafcaankaafa loo gudbiyo maxkamada.
Haddii aad isbedesho oo aad rabto inaad dacwadaadii/rafcaankaagii la soo noqoto waxaad wargelinaysaa inaad go’aankii aqbashay Hey’adda laanta socdaalka. Markaa lama tijaabindoono/lama eegidoono warqadaadii rafcaanka, sidaa daraadeed markale rafcaan kama qaadankartid go’aankii lagu siiyey.
Power of Attorney, form number 107011 (oo af ingiriis)
Go’aamada dhammaantoo rafcaan lagama qaadankaro
Go’aamada qaarkood adigu rafcaan kama qaadankartid. Go’aanka laguu soo diray ayey ku qoran tahay inaad rafcaan ka qaadankarto iyo inkale.
Waxyaabaha aanad rafcaanka ka qaadanakrin waxa ka mid ah.
go’aan aad hore u aqbashay oo aad saxiixay inaad ku qanacsan tahay
haddii ay ay Maxkamada sare ee hey’adda laanta socdaalku diido in aanay kiiskaaga tijaabinayn/eegeyn
haddii aad adigu leedahay sharci deggenaansho ah oo ku meelgaar ah.
Wakhtiyo kala duwan ayey leeyihiin kiisaska rafcaanka laga qaadanayo ee kala duwani
Wakhtiga ugu dambeeya ee rafcaanka laga qaadankaro
Waxa adiga lagu siiyey
Rafcaan ayaad ka qaadankartaa
go’aan masaafuris ah
sadex usbuuc ayaad haysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka
go’aanka celinta si dhakhso ah ayaa loo fulinayaa
xukun ka yimid maxkamada hey’adda laanta socdaalka
go’aan ku saabsan inaad tahay qof qaxooti ah si uu qorayo heshiiskii Geneva iyo kan EU-da
go’aan ku saabsan baasaboorka yar/warqad safar
go’aan ku saabsan baasaboorka dadka shisheeyaha
waxa lagaa mamnuucay waddama Schengenländer inaad markale dib ugu soo laabtao maadaam aanay Iswiidhan wakhtigii laguugu talogalay inad ka baxdo aanad ka bixin
waxa jirta sabab kale oo lagaaga mamnuucay inaad dib u soo laabato
go’aan ku saabsan kaalmo gaar ah
go’aan ku saabsan dhimista ama joojinta lacagta gunnada maalintii qofka la siiyo
shan usbuuc ayaa heysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka ay gaartay Hey’adda laanta socdaalku
aqoonsi darajo magangelyo kale (haddii aad adigu u aragto in bedelkeeda ay suurtogal tahay in qaxootinimo laguu aqoosado)
go’aan ku saabsan in indhaha lagugu hayo ama meel lagugu xiro
mark aad doonto